Ukwakhiwa: Kuqukethe umgubo wegram: Oxytetracycline ………………………………… 25mg. Intengiso yenethiwekhi ... Inkcazelo: I-Oxetetracycline i-premix liqela le-bacteriostatic elwa nentsholongwane. Ingenelele ekulweni i-gram-positive kunye ne gram-negative sensitive njenge-Strepto ...
I-Tilmicosin phosphate Premix
Ukwakheka: I-Tilmicosin (njengephosphate) ………………………………………………… ……………………… 200mg Isiphatho somthwali ……………………………………… ………………………………………. 1 g Inkcazo: I-Tilmicosin iguqulwa ngemichiza ye-macrolide ebulala ixesha elide esetyenziselwa iyeza kunyango. isebenza ngokuchasene ne-gram-positive kunye nezinye i-gram-negative microorganisms (i-streptococci, staphylococci, pasteurella spp., mycoplasmas, njl.). isetyenziswe ngomlomo kwihagu, i-tilmicosin ifikelela kwinqanaba eliphezulu legazi emva kweeyure ezi-2 kwaye igcina ikhonkrithi ephezulu yonyango ...
I-Tiamulin Fumarate premix
ukwakhiwa: i-tiamax (i-tiamulin iipesenti ezingama-80) yiproperty yokutya equlathe i-800 g ye-tiamulin hydrogen fumarate ngekhilogrem nganye. isibonakaliso: i-tiamulin sisiphumo esenziwe ngokwenziwa kwe-pleuromutilin. isebenza ngokuchasene nezinto eziphilayo ezinesifo segram, i-mycoplasmas kunye ne-serpulina (treponema) hyodysenteriae. I-tiamulin isetyenziselwa ukuthintela nokulawula izifo ze-mycoplasmal ezifana ne-enzootic pneumonia kunye nesifo sokuphefumla esingapheliyo kwihagu kunye nenkukhu; Ukuntywila kwengulube, i-porcine colon spirochaetosis kunye neprotecine ...
Ubume bayo: I-Flofenicol ……………………………………… …………………………………………………………………………………………… 100mg intengiso yomkhweli …………………………………………………………… ……………………………. 1 g Inkcazo: IFlorfenicol yeyamayeza okubulala intsholongwane ebanzi, ngokuchasene neentsholongwane ezahlukeneyo zegramma, i-bacteria yeGram-negative kunye ne-mycoplasma inomsebenzi owomeleleyo we-antibacterial. IFlorfenicol ngokuyintloko yiarhente ye-bacteriostatic, ngokubopha i-ribosomal 50s, inhibit synthesis protein protein. IFlorfenicol kwi-vitro antibacterial yomsebenzi we-microorganisms ezininzi kunye ne-chloramp ...
Ukwakhiwa: Ivermectin iipesenti ezingama-0,2%, 0,6%, 1%, 2%: 2%, 0,6%, 1%, 2% Ivermectin isebenza kakhulu kunyango nokulawula iiparashuthi zangaphakathi nangaphandle kwiinkomo, iigusha, iibhokhwe, iihagu kunye. Isibonisi seenkamela: I-Vetomec ibonakaliswa kunyango kunye nokulawulwa kwe-circworms yesisu, amaphaphu, amagqabi, isikere, iimpukane ezibhabha, iingcongconi, imikhono kunye neencindi ezinkomeni, iigusha, iibhokhwe kunye neenkamela. Iimpethu ze-gastrointestinal: cooperia spp., Haemonchus placei, oesophagostomum radiatus, ostertagia ...
Uqulunqo: Diclazuril …………………………… 5mg Isiphatho sesithwali ……………………………………… 1g Abalinganiswa: Umgubo omhlophe okanye omhlophe-njenge-Diclazuril ye-triazine benzyl cyanide, njengoko intsha, iphezulu ukusebenza kakuhle, iziyobisi ezinobuthi obuphantsi, ezisetyenziswa ngokubanzi kwinkukhu yenkukhu. Inkqubo ye-Diclazuril ye-anticoccidial gramic ayicacanga. Indima ephambili yecoccidia yencopho, eneentlobo ezahlukeneyo kunye nezahlulo ezahlukeneyo ze-genera, njenge-eimeria eyona ngongoma iphambili yesigaba sesibini somjikelezo wesini se-coccidia. kodwa inkulu, ...